Youtube နှင့် အခြားသော ဝက်ဆိုက်ဒ် တွေက Video တွေကို Download Manager မရှိဘဲ ဒေါင်းရအောင် ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Youtube နှင့် အခြားသော ဝက်ဆိုက်ဒ် တွေက Video တွေကို Download Manager မရှိဘဲ ဒေါင်းရအောင်
Tuesday, September 27, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
Youtube ကသာမက ကျန်တဲ့ Video Site တွေကပါ Software မလိုဘဲ Download ချနည်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။Video DownloadHelper လို့ခေါ်ပါတယ်။ Firefox မှာ ပေါင်းထည့်တာနဲ့ တင် Download ကို Auto ချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆိုဒ်မှာ Register လုပ်ထားရင် converter ပါလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အတော်လေးကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါဘဲ။ Download Messenger မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။
1. ဒီနေရာလေးကို Click ပြီး Add to Firefox ကို click ပြီး Firefox မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Restart ချပါလိမ့်မည်။
2. Youtube ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း Button လေး ပေါ်နေပါမည်။ Down Arrow လေးကို click လိုက်ရင် Menu Box လေးကျလာပါမည်။ ပြီးရင် Download ကို click လိုက်ရင် Download စတင်ချပါသည်။ မိမိ ချလိုက်တဲ့ Video တွေ Desktop ပေါ်ရောက်ပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ ကျန်တဲ့ Movies site တွေက ချမယ်ဆိုရင်အောက်ပါအတိုင်း Address bar မှာ ပေါ်နေတဲ့ Video DownloadHelper Icon ကို click ပြီး Download ချလိုက်ပါ။အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေ မူရင်း။ ။ မိုးထက်မြင့်
အဲဒါ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် Firefox အတွက် နောက်ထပ် add on လေး တစ်ခုရှိပါသေးတယ် သူကတော့ Easy YouTube Downloader လေးပါ ဒီနေရာလေးမှာ
သွားပြီး add on လုပ်လိုက်ပါ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း Restart ပေးလိုက်ပါ ။ ကံကောင်းကြပါစေဗျာ...
29 May 2012 at 06:14 Reply
Easy YTD လေးဒေါင်းသွားတယ်..ကျေးဇူးနော်...
Vinon Jat Vipassana meditation temple says:
19 April 2017 at 20:35 Reply
Recovery အတွက် အကောင်းဆုံးပါ
Online radio Collection Player
ဒါကတော့ ကိုယ် IP အစစ်ကိုသူများမသိစေချင်တဲ့သူတွေအတွ...
iDance ~ D Player
Music MP3 Downloader 5.2.2.8 Portable (Latest Ver...
Download Accelerator Plus (DAP) 9.4.1 Premium (Lat...
SLOW PCfighter v1.2.61
Sreen Capture (Protable)
English-Myanmar Dictionary (Version 1.0) released....
Mozilla Firefox အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ Add on များ
Internet Download manager 6.07 Build 10 (Protable)...
Browser Plugin တွေကို အမြဲ Update ဖြစ်နေအောင်
Virus မ၀င်အောင် ကာကွယ်ခြင်း (ဖြည့်စွက်ချက်)
ကွန်ပြူတာ တိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Data Recovery Sof...
Disable auto run/ auto play
Sothink SWF Easy 6.11 with serial keys
Free Windows7Download (No Need for rapidshare/ho...
Driver Software For Windows XP Portable
USB Bootmaker for Windows XP,Vista,Win7
Trojans,Keyloggers ဘာညာတွေအတွက် စိတ်မပျက်လေနှင့်
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေး သုံးပြီး Desktop ကို Backup နဲ့R...
Gtalk မှာ မြန်မာစာ ပြဿနာ
မြန်မာပြည် မှ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ အတွက်သာ
iPhone ကိုယ်တိုင် Unlock လုပ်ခြင်း (မြန်မာ ebook)
Gtalk music plugin in Window Media Player
G mail ရဲ့စာရေးတဲ့အထဲမှာ ပုံကလေးနဲ့ပို့ကြည့်ရအောင်...
စာအုပ်များ ဖတ်နိုင်တဲ့ ဝက်ဆိုက်ဒ်တွေပါ
Android ဖုန်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်ခြင်း နည်းလမ်း ...
အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေပါ ဖြေးဖြေးချင်း မွြှေ...
USB Disk Security Latest 6.0.0.126 Full Version
မိုဘိုင်း ဖန်းဝဲလ် အဆင့်မြင့်ခြင်း (ဆိုနီ)
Windows 8 တွင် မြန်မာစာ စနစ် အပြီးပါလာတော့မည်
Security Software များသီးသန့် Download လုပ်ပေးနိုင...
computer ထဲမှာ karaoke ဆိုကြမယ်
Download Manager မရှိလို့စိတ်ညစ်နေလား?
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ ရှိသင့်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများ ကို ရ...
TuneUp Utilities - 2012 (Full Version)-[Pc Mainten...
အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုက်ဒ် လိပ်စာတွေပါ အားရပါးရ မွှေကြပေေ...
Save Mode အကြောင်း
HDD သန့် ရှင်းရေးအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲသေးသေးလေး..
အခြေခံ ကွန်ပြူတာ ပြုပြင် စောင့်ရှောက်ရန် နည်းလမ်းမ...
Change myanmar font in Sony Ericsson Xperia X8 or ...
Best Freewares Best Photo Editing Freeware
IE Zawgyi Gtalk font.exe
Portable AV Voice Changer DIAMOND v7.0.29
Google Hack Software 1.6
Fresh and Free Utilities တွေ အများကြီး ရနိုင်တဲ့ ဆ...
မိမိရဲ့ Desktop မှာ မြန်မာ Calendar Gadget ထားချင်...
AnvSoft Photo Flash Maker Professional 5.27(Full V...
IDM နဲ့ ဖိုင်အများကြီးဒေါင်းချင်ရင် . .။
MagicCute Data Recovery 2011.1.0.0 Portable
Photo Slideshow Creator 2.67 Portable
Portable 360 Amigo System Speedup Pro 1.2.1.7500
ဆော့ဝဲလ်တွေကို mulitiupload မှ ဒေါင်းလော့ယူမယ်ဆိုရ...
ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ မြန်မာစာတမ်း...
Flash Song လုပ်နည်းအသေးစိပ်
Free Licensed Software/Games Daily